Better Sales Leader (အရောင်းအဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးဦးဆောင်နိုင်ဖို့) - Better Version
Better Sales Leader (အရောင်းအဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးဦးဆောင်နိုင်ဖို့)
October 5, 2020 2021-10-29 20:48
လုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက် အနေနဲ့ ၊ အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာကို တာဝန်ယူထားရတဲ့ မန်နေဂျာတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကိုယ့်အရောင်းသမားများကို အကောင်းဆုံး ပုံစံနဲ့ စီမံ ဦးဆောင်နိုင်ပြီး ရောင်းအားမြှင့်တင်နိုင်ဖို့ Better Sales Leaders – Online Course
အရောင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်လာဖို့အတွက် Better Sales Mastery Series ရဲ့ သင်တန်း တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Better Sales Leader သင်တန်းမှာ ဆိုရင်
🎯ကိုယ့်အရောင်းအဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ဘယ်လို ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မလဲ။
🎯ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ Sales Target ရရှိဖို့ လူဘယ်နှစ်ယောက် ခန့်ရမလဲ။
🎯ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အရောင်းသမားတွေကို ဘယ်ရွေးချယ်ခန့်အပ်မလဲ။
🎯Motivation အပြည့်ရှိနေတဲ့ အရောင်းသမားတွေ ဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ။
🎯အရောင်းသမားတွေရဲ့ အရည်အသွေးကို ဘယ်လို အကဲဖြတ်ပြီး
🎯ရောင်းအားကျ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အရောင်းသမားတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲ။
🎯အစည်းအဝေးထိုင်တိုင်း ရလာဒ်ကောင်းတွေ ရလာနိုင်အောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ။
စတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပါဝင်သွားမှာ ဖြစ်တဲ့ အပြင် Better Version ရဲ့ သင်တန်းများရဲ့ ပုံစံအတိုင်း လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ၊ Tool များ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်အရောင်းအဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးဦးဆောင်နိုင်ဖို့ Better Sales Mastery Series ရဲ့ နောက်ဆုံးအတန်းဖြစ်တဲ့ Better Sales Leader: Lead & Grow Together အတန်းကိုတက်ပါ။
သင်ခန်းစာ Video တွေကို လေ့လာတဲ့အခါ အဆင်ပြေစေဖို့အတွက် အကြံပြုချက်များ
Module 1 : Leadership Vs Management (စီမံခန့်ခွဲမှု နဲ့‌ ခေါင်းဆောင်မှုပုံစံများအကြောင်း)
ခေါင်းဆောင်ကောင်းဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေ၊ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တွေလိုအပ်သလဲ ဆိုတာကို ဒီ modules မှာလေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
How we createacourse at Better Version
Better Sales Leader Course Introduction
Join with fellow learners to extend your network
What Better Version Can Do For You?
Why people follow you? – Influential Factors
A Leader’s Traits
6 Quotients to becomeagreat Leader
Think & Find Out
BSL – Module 1 Quiz
BSL - Resources
Download ပြုလုပ်ရန် Files များ
BSL Modules – pdf
Job Analysis − excel file
Position Agreement – excel file
Salesforce Calculation – Template
Performance Appraisal and Bonus Calculation – Template
Contribution Margin Formula Excel_Template
Module2: Organizing Your Sales Team (အရောင်းအဖွဲ့ကို အကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ ဘယ်လိုဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မလဲ)
ချမှတ်ထားတဲ့ရဲ့ Sales Target ရရှိဖို့ လူဘယ်နှစ်ယောက် ခန့်ရမလဲ။ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါတဲ့ အရောင်းသမားတွေကို ဘယ်လို interview ပြီးရွေးချယ်ခန့်အပ်မလဲ ဆိုတာကို ဒီ modules မှာလေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Marketing Objective – Sales Objectives – Sales Strategy
Sales Vs Marketing Oriented Structure
Marketing Management and Personal Selling Management
Salesforce Structure Designs
Salesforce Size Calculation
Salesforce Size Calculation Tutorial
Sales Objectives Setting
Application form for Shortlists
The Interview and Techniques To Use
BSL – Module2Quiz
Module3: Motivation and Training and Compensation (အရောင်းသမားတွေ တက်တက်ကြွကြွနဲ့အလုပ်တွေ လုပ်ကြစေဖို့အတွက်)
Motivation သီအိုရီအမျိုးမျိုး အကြောင်းသိသွားမယ်။ Motivation အပြည့်ရှိနေတဲ့ အရောင်းသမားတွေ ဖြစ်လာဖို့ ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ။ ငွေကြေးတစ်ခုတည်းမဟုတ်ပဲ တစ်ခြား ဘယ်လို နည်းတွေ သုံးနိုင် မလဲ။ ရောင်းအားကျ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေတဲ့ အရောင်းသမားတွေကို ဘယ်လို ကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာကို လေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Motivation – Theory X & Theory Y
Motivation & Behaviors
Motivation – Maslow’s Hierarchy Of Needs
Motivation – Herzberg’s Dual Factor
Motivation- Vroom’s Expectancy Theory
Motivation – Adam’s Inequity Theory
Model of Salesforce Motivation
General Tips for Motivation
Motivations in Practices
10 Things To Motivate Your Team
No Cost and Low Cost Reward for Motivations
7 Challenges That Every Business Must Meet
Training – Process – Content – Methods
BSL – Module3Quiz
Better Version မှ သင်တန်းများရဲ့ အရည်အသွေးများ မြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် Half_Class Feedback Form လေးကိုဖြည့်ပေးပါဦးနော်။
Module4: Managing Sales Performance (အရောင်းရလဒ်များအား စီမံခန့်ခွဲခြင်း)
အရောင်းသမားတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို ဘယ်လို အကဲဖြတ်မလဲ၊ ဘယ်လို နည်းတွေနဲ့ bonus တွက်ပေးလို့ရလဲ၊ အလုပ်တာဝန်တွေကို စနစ်တကျ ဘယ်လိုခွဲဝေပေးလို့ရလဲ ဆိုတာကို နားလည်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Sales Performance Evaluation Process
Performance Appraisal and Bonus Calculation
Performance Appraisal and Bonus Calculation (Tutorial)
BSL – Module4Quiz
Module5: Effective Meeting Vs Huddles (ထိရောက်တဲ့ အစည်းအဝေးလုပ်ခြင်း)
မီတင်တွေ၊ briefing တွေကျရင် စနစ်တကျ ဖြစ်အောင်၊ အစည်းအဝေးထိုင်တိုင်း ရလာဒ်ကောင်းတွေ ရလာအောင် ဘယ်လို လုပ်ဆောင်နိုင်မလဲ ဆိုတာကို သိရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Effective Sales Meeting – Planning
Running An Effective Huddle
BSL – Module5Quiz
Better Version မှ ပိုကောင်းတဲ့ service ကိုပေးနိုင်ဖို့ လူကြီးမင်းတို့ရဲ့ အချိန်၂မိနစ်လောက်လေးပေးပြီး Feedback form လေးကို ကူညီဖြေကြားပေးဖို့အတွက် မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်။
Better Sales Leader အတန်းတက်ရောက်ပြီးသူများအတွက်
Duration	7 hours
Enrolled	393 students
Message Strategy: Applied Behavioral Economics Principles In Sales & Marketing
Practical Marketing Strategies (လက်တွေ့အသုံးချ မားကတ်တင်းဗျူဟာချမှတ်နိုင်ဖို့)
Better Negotiator (ရလာဒ်ကောင်းတဲ့ ညှိနှိုင်းရေးသမားကောင်းဖြစ်လာစေဖို့)
Better Sales Strategist (မဟာဗျူဟာမြောက် အရောင်းပိုင်း စီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့)
Better Salesman: Grow Your Revenues (ထိပ်တန်းအရောင်းသမားဖြစ်ဖို့)